Blog | Burmese Web
Comment Spam တွေကို တစ်ကြိမ်တည်း ဘယ်လို ဖျက်မလည်း ?
Sep 3, 2020 | Beginners Guide, Blog, Tutorial |0Comments
WordPress မှာ အဆိုးဆုံးကတော့ Comment Spam လို့ခေါ်တဲ့ Comment ထဲမှာ Spam တွေ ပေါ်တာတွေပါပဲ။ အဲ့ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Akismet Anti-Spam Plugin ကို ဝယ်ပြီးအသုံးပြုဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ကြတော့ ၁ ဒေါ်လာတောင် မသုံးချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ Comment...
Google Maps Location ရှိပြီးသား Website ပေါ်မှာ ပေါ်အောင်လို့ ဘယ်လိုယူမလည်း
Aug 28, 2020 | Beginners Guide, Blog, Tutorial |0Comments
Google Maps ပေါ်မှာ Location ရှိပြီးသားကို ကျနော်တို့တွေ ယူကြတာ တစ်ချို့ဆိုရင် ခက်ခက် ခဲခဲ Website ပေါ်မှာ ပေါ်အောင်လို့ထည့်နေကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း Google Maps မရှိသေးလို့ ဒီလိုမျိုး Google Developer အကောင့်ဖွင့်ပြီး ထည့်တယ်ဆိုရင် ပြဿနာ သိပ်မရှိပေမယ့် အခုလိုမျိုး...
Aug 28, 2020 | Blog, Plugins, Tutorial |0Comments
သင့်မှာ WordPress Website ၂ခုရှိပြီး တစ်ဘက်က တစ်ခုကို တစ်ဘက်မှာပေါ်စေချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ? သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ဘက်က RSS Feed ကိုတော့ထုတ်ရမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် RSS Feed ဆိုတာ ယူရတာလွယ်ကူပေမယ့် ကိုယ်ပြန်ပေါ်စေချင်သလိုမျိုး...